oxytetracycline jekiseni 20% - China Chongqing Fangtong
Raw Material Mukudhinda
Zvinoumba 5% neimwe Rine mamiririta rine Oxytetracycline 50 MG. 10% neimwe Rine mamiririta rine Oxytetracycline 100 MG. 13% neimwe Rine mamiririta rine Oxytetracycline 130 MG. 20% neimwe Rine mamiririta rine Oxytetracycline 200 MG. 30% neimwe Rine mamiririta rine Oxytetracycline MG 300. Rondedzero Fangtongoxy ari rakafara chakarondedzera bacteriostatic mushonga. It anoita giremu-akanaka uye giremu negative Micro-zvinenge. Zvinonyanya nehanya streptococci, clostridia, E.coli, shigellae, brucellae, salmonellae, leptospirae. Nezvimwewo In addit ...
5% neimwe Rine mamiririta rine Oxytetracycline 50 MG.
10% neimwe Rine mamiririta rine Oxytetracycline 100 MG.
13% neimwe Rine mamiririta rine Oxytetracycline 130 MG.
20% neimwe Rine mamiririta rine Oxytetracycline 200 MG.
30% neimwe Rine mamiririta rine Oxytetracycline MG 300.
Fangtongoxy ari rakafara chakarondedzera bacteriostatic mushonga. It anoita giremu-akanaka uye giremu negative Micro-zvinenge. Zvinonyanya nehanya streptococci, clostridia, E.coli, shigellae, brucellae, salmonellae, leptospirae. Nezvimwewo Uyezve, zviri inoshanda kumirisana nevamwe mycoplasmas, rickettsiae, chlamydiae, vamwe majemusi uye mavhairasi makuru.
Pashure kwokubatsira kuchirapa dose pamusoro Fangtongoxy 5%, yakakwirira azvipire Oxytetracycline muropa kunokwanisika mukati hafu yeawa kuti 4 maawa.
Treatment kwezvirwere zvinokonzerwa Oxtetracycline-muvamwe zvinenge zviri mombe, makwai nembudzi. Zvirwere kusanganisira nemabayo uye kutumira nefivhiri kunzwisisa chokuita Pasteurella spp uye Haemophilus spp, chirwere bovine kerato-conjunctivitis (pinkeye) anokonzerwa Moraxella bovis, rutsoka kuora uye diphtheria anokonzerwa Fusobacterium necrophorum, kwemabhakitiriya enteritis (scours) anokonzerwa Escherichia coli coli, rurimi yematanda kunokonzerwa kubudikidza Actinobacillus lignierisii; leptospirosis anokonzerwa Leptospira pomoma; ndakakuvadza noutachiona uye rikwanise metritis zvinokonzerwa okuva staphylocci uye streptococci zvinenge tisanzwe Oxytetracycline.
Emombe: Bronchopneumonia uye zvimwe zvirwere kufema, zvirwere zviri nemudumbu, metritis, mastitis, septicemia, puerperal utachiona, uye yechipiri bacterrial zvirwere anonyanya zvinokonzerwa nemavhairasi, etc
Makwai nembudzi utachiona kubva kufema, urogenital, nemudumbu uye mahwanda, mastitis, maronda utachiona, etc
Usage uye Kutarisirwa
Pa ne intramuscular jekiseni. The dose yezviri musimboti Oxytetracy-Cline mari kusvika 10 MG / makirogiramu bodyweight hwemhuka. Vanoisira nokuti 3 - 5 Mazuva zvichienderana nemhando nekuomarara utachiona. The Kutarisirwa rinoitwa zvinotevera vhoriyamu:
Mombe 2ml / 10 makirogiramu bodyweight
Mhuru 2ml / 10 makirogiramu bodyweight
Makwai nembudzi 2ml / 10 makirogiramu bodyweight
Nguruve 2ml / 10 makirogiramu bodyweight
Side kushanda uye contraindication
Fangtongoxy 5% haina arongera katsi, imbwa uye mabhiza. Hazvifaniri kupiwa mhuka mukupera pamuviri, mhuka zvakaoma. kukuvadza ine chiropa uye itsvo uye kune mhuka zvisina basa kuna Oxytetraycline.
Dzimwe nguva pfupi kuzvimba pamusoro jekiseni paIndaneti kunoitika.
kushaya hanya kumwedzi
Kubva okupedzisira kurapwa, mukati memazuva 21 nyama uye dzinodyiwa nyama uye mukati memazuva 7 mukaka.
Chitoro panzvimbo inotonhorera uye yakaoma nzvimbo pazasi 25 centi-madhigirii, kure chiedza
Previous: oxytetracycline jekiseni 13%
Next: oxytetracycline jekiseni 30%
5% Oxytetracycline jekiseni
Inorwisa mabhakitiriya Oxytetracycline jekiseni
Fair Price Oxytetracycline jekiseni
Oxytetracycline Hcl jekiseni For Animals
Oxytetracycline Hcl jekiseni Liquid
Oxytetracycline jekiseni 5% For Camel
Oxytetracycline jekiseni For Animals
Oxytetracycline jekiseni For Horse
Oxytetracycline jekiseni For Pig
Oxytetracycline jekiseni Veterinary
Oxytetracycline Powder 5% jekiseni
Oxytetracycline Powder jekiseni
Oxytetracycline Solution jekiseni
oxytetracycline jekiseni 13%
oxytetracycline jekiseni 10%
oxytetracycline jekiseni 30%
Kutyisidzirwa netsoka-uye-muromo chirwere muna N ...
Masayendisiti vanoshanda kukudziridza kupisa nemishonga ...
Vanotsvakurudza kuziva chirwere chitsva mombe imwe ...
Kudzivirira nguruve kubva PRRS panguva reproduc ...